Cuntooyinka ay ku jiraan fitamiin B?
Jimicsi Nafaqada haboon
Xaqiiqda ah in nadaafadeenu aanu wax ka tarin raasamaalka dheeraadka ah - dumarku waa ogyihiin. Qaar waxay wali isticmaalaan aqoontan si aad u firfircoon nafaqadooda. Sida fitamiinada, waxay, sida arrin dabcan, waxay ku jiraan in hilibka lo'da la kariyey ee kaabajka. Oo halkan ma joogo!
Sida ay u soo baxday, taageerayaal badan oo cuntooyin ah ayaa ka xanuunsanaya beriberi - la'aanta fitamiin B1. Miisaankani, ugu horreyntii, wuxuu isu muujiyaa qaabka maqnaanshaha iyo xanaaqa. Si aan u cunno cuntooyinkeenna oo kaliya ma qaadan karno kiilo, laakiin isla markaa oo si habboon u quudin, tixgeli waxyaabaha ku jira fitamiin B ee cuntada.
B1 ama Thiamine waxay si firfircoon uga qaybqaadanayaan nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka, burburinta dufanka, carbohydrateska iyo borotiinka. Intaa waxa dheer, waxay ka qaybqaadataa shaqada habdhiska dareenka, sidoo kale waa caqabad dabiici ah oo jidhka ka soo horjeeda saameynta sunta. Cuntooyinka ay ku jiraan fitamiin B1:
beerka, hilibka doofaarka iyo hilibka lo'da;
rooti rooti ah;
miro, boorash bakeer;
B2 ama Riboflavin ayaa masuul ka ah waxqabadka taranka, sameynta jadeecada iyo difaaca, iyo sidoo kale quruxda iyo caafimaadka maqaarka, timaha iyo ciddiyaha. Biyaha-qoyan, xad-dhaafka waxaa ka soo baxa kaadida. Waxyaalaha fitamiinada B2 ee cuntada:
almonds iyo looska geedaha;
B3 ama nicotinic acid waa fiitamiin aad u muhiim u ah shaqada caadiga ah ee nidaamka wadnaha iyo xididada, wuxuu ballaariyaa xididada, wuxuu ka qaybqaataa geedi socodka oksida. Cunno noocee ah ayaa ku jirta fitamiin B3:
B5 ama pantothenic acid waxay ku lug leedahay kobcinta unugyada dhiiga, antibodies, amino acids, metabolismka dufanka, carbohydrateska iyo borotiinada. Badeecada:
B6 ama pyridoxine ayaa mas'uul ka ah yaraynta muruqyada dareenka ee muruqyada inta lagu jiro hurdada, dabeecada dabiiciga ah, oo mas'uul ka ah isuduwidda borotiinka iyo dufanka. Waxaa ku jira:
B8 ama biotin waa fitamiin qurux badan. Aad bay muhiim u tahay maqaarka iyo timaha. Waxay masuul ka tahay kobaca unugyada, dheef-shiid kiimikaad, iyo sidoo kale isticmaalka fitamiin B kale. Cunnada cuntada:
beerka iyo kelyaha.
B9 ama folic acid ayaa masuul ka ah waxqabadka hababka neerfaha iyo wareegga dhiigga, dhajinta unugyada, jirka aadanaha lama soo saarin. Badeecada:
beerka iyo kelyaha;
B12 ama cobalamin wuxuu hagaajiyaa xasuusta, xoojinta, wuxuu mas'uul ka yahay shaqada nidaamka dareenka, koritaanka iyo rabitaanka cuntada. Waxaa ku jira:
B13 ama orot acid waxay ku lug leedahay suurtogalnimada fitamiinada, hepatocytes, mas'uul ka ah hawsha taranka, caafimaadka beerka. Badeecada:
sunta lactic acid;
caanaha la isku qurxiyo.
B15 (pangamic acid) iyo B 17 (laetral) waa walxo fitamiin oo kale ah. B15 waxay hawlgelisaa shaqada beerka iyo kelyaha, iyo B17 waxay u adeegtaa sidii looga hortago kansarka. B15 waxaa laga helaa qaraha, sisinta, beerka, iyo B17 ee lafaha miro: khudradda, fersken, tufaax iyo jeeriga.
Taasi waa dhan. Waxaan kala-tagnay waxyaalihii dhammaanba fiitamiin B ee cuntada. Fikraddan ayaa soo baxday: fitamiinnada kooxda B ayaa muhiim u ah shaqada caadiga ah ee jirka oo dhan, waxay dhammaantood ka qayb qaataan hababka dheef-shiid kiimikaad hooseeya, dhajinta unugyada, waxayna sidoo kale masuul ka yihiin muuqaalkayaga caafimaadka leh oo soo jiidasho leh. Dhamaantood waa biyo-qoyan, ha isku ururin oo waa la tuuraa. Isku day inaad naftaada u rogto miisaanka, ha iloobin baahida jirkaaga iyo buuxinta sahayda fitamiin B!
Waa maxay isticmaalka fitamiinada?
Cuntooyinka ay ku jiraan glucose?
Hematogen - faa'iido
Kalluunka ugu waxtar badan
Ma ka fiican yahay basbaas gaduud?
Cuntada ku habboon - Cuntada waxtar leh
Isomalt - waxyeelo iyo faa'iido
Roodhaha macaanka - wanaagsan oo xun
Waa imisa xabuubka joodariga ah?
Riyaha daikon - hantida faa'iido leh
Alaabta fatahaada ee haweenka
Khudradda cagaaran - qiyaasta kalooriga
Sidee si sax ah u cabtaa biyaha?
Fred Perry Kabaha
Madaxda ingriiska Harry iyo William ayaa ku magacaabay sawirqaade u ah muusigga Diana
Waa maxay sababta riyada ee tuulada?
Amelia Clarke ayaa soo kabatay?
Meryl Streep ayaa "tarjumay foollada" Melania Trump ka dib fadeexad ku saabsan kadeedka jinsiga ee Weinstein
Irina Sheik ee dharka lagu maydho
Pyriv - sida loo tirtiro?
Caleemaha barwaaqaysan - guryaha hantida leh
Cudurka injirta eeyaha - calaamadaha iyo daaweynta
Waraaqaha derbiyada ee rinjiga
35 isbuuc qiyaasta - wicling
Ciddiyo leh jajabyo
Sidaad u illoobi lahayd qofka aad jeceshahay?
Larva ee duqsiyo bisha May
T-shaati oo leh magacyo
7aad ee uurka
Goorma ayaan yeelan karaa ilmo soo ridida?